जेटी कप क्रिकेटप्रति आकर्षण बृद्धि भएको छ • Anumodan National Daily
जेटी कप क्रिकेटप्रति आकर्षण बृद्धि भएको छ
प्रकाशित मिति : 16th November 2018
जेटी कप क्रिकेटको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मुडाबजारमा रहेको खेलमैदानमा भोलि (मंसिर १ गते) देखि चौथौ जेटी कप क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदैछ । प्रतियोगिताको तयारी असन्तम चरणमा पुगेको छ । प्रतियोगितामा भाग लिने टिम दर्ता कार्य पनि अन्तिम चरणमा छ । त्यस्तै, खेलमैदान मर्मत तथा पिच निर्माण कार्य पुरा भएको छ ।
संस्थापक, जगततारा बोर्डिङ स्कूल
प्रतियोगिता सञ्चालनका मुख्य चुनौति र समस्याबारे बताइ दिनुस् न ।
यो विद्यालय स्तरमा ठूलो धनराशि पुरस्कार भएको क्रिकेट प्रतियोगिता हो । त्यसैले चौथो जेटी कप क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनको प्रमुख चुनौति भनेकै आर्थिक व्यवस्थापन नै हो । हामीले स्कुलबाटै आर्थिक सहयोग जुटाएर प्रतियोगता सञ्चालन गर्दैछौं । यो क्रिकेट प्रतियोगिता चौथौ संस्करणसम्म आइपुग्दा लगानी झन् बढेको छ । हामीले क्रिकेट प्रतियोगिता लाभका लागि नभई क्रिकेट तथा खेलाडीको विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोजना गरेका हौं । चौथो संस्करणसम्म आइपुग्दा जेटी कप क्रिकेटप्रति क्रिकेटर तथा दर्शको आकर्षण निकै बृद्धि भएको छ ।
यो प्रतियोगितामा कुन कुन ठाउँका टिम सहभागी बन्दैछन् ?
चौथौ जेटी कप क्रिकेट प्रतियोगितामा कैलाली जिल्लाका २० टीम सहभागी हुँदैछन् । विगत तीन संस्करणमा धनगढीका केही विद्यालय सहभागी रहेकोमा यस वर्ष सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको छ । जिल्लाको टीकापुर, लम्की, बौनिया, सुखड लगायतका स्थानबाट टिम सहभागी बन्नेछन् ।
चौथो संस्करणमा के कति पुरस्कार राशि रहेको छ ?
२०७२ सालमा पहिलो संस्करणमा विजेताले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएकोमा चौथो संस्करणसम्म आइपुग्दा ६१ हजार एक सय ११ रुपैयाँ पुरस्कार पुगेको छ । त्यस्तै, उपविजेताले ३१ हजार एक सय ११ रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने छ । त्यस्तै, प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तथा उत्कृष्ट बलर, उत्कृष्ट व्याट्सम्यान र उदियमान खेलाडी र प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याच पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।
चौथो जेटी कप क्रिकेटमा प्रायोजन, सहयोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
चौथो जेटी कप क्रिकेट प्रतियोगिताको प्रमुख प्रायोजक अक्सब्रिज पब्लिकेशन रहेको छ । त्यस्तै, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले विगतका वर्ष झैं यस पटक पनि सहयोग गर्दै मुख्य प्रवद्र्धक रहेको छ । त्यस्तै, छिमेकी घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न पब्लिेकेशन तथा स्थानीय व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गरेका छन् । लम्कीस्थित प्रमोद पुस्तक पसलले प्रतियोगिताको म्यान अफ द म्याचको पुरस्कार उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
चौथो जेटी कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी बनेकोमा सबै विद्यालयमा आभार प्रकट गर्दछु । सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सबै खेल हेर्न आइदिन हुन अनुरोध गर्दछु । यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रायोजन, सहयोग गर्नुहुने संघसंस्थाका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने शिक्षक, व्यापारी, संघसंस्था, पत्रकार तथा आम बर्दगोरियावासीमा हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
प्रस्तुति : पदम ओझा
सेती अञ्चल अस्पतालकाे प्रसुतिगृह तीन दिनदेखि सुनसान
कृषक समुहलाई गहु पिस्ने मेसिन वितरण
लम्की–टीकापुर सडकको खाल्डाखुल्डी सम्याउदै जानकी
कतिपय सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र नै छैन
चैत 12 गते (epaper)
सम्पादक : एकिन्द्र तिमिल्सिना,
विषेश सम्वाददाता : श्रवण देउवा, भीम चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, कपिल भट्ट(काठमाडौँ)
स्तम्भकारहरु : गोविन्दराज जोशी, गणेश विक, रामलाल जोशी , सौरभ शर्मा, रमण पनेरू, शेरबहादुर वस्नेत, सरोज पोख्रेल, सचितानन्द जोशी, धर्मराज पाठक, मोहनदेव जोशी, माधव लोहनी, गणेश नेपाली, हरि रेग्मी, रामदास चौधरी, संगिता अधिकारी